Bhose June 28, 20132013-06-28T12:00:40+00:002015-10-30T12:53:06+00:00 Blog, ကျန်းမာရေးအာမခံ
သင်တို့ကိုလွှမ်းခြုံနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့်သင်ကတက်ယူ - အာမခံနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်, သို့မဟုတ်သင်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်မိသားစုအကြောင်း hoot မပေးပါဘူးမပေးတဲ့အတွက်. သင်သည်အစဉ်အဆက်အချို့သောမတော်တဆမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပြီးသင့်အာမခံကု​​မ္ပဏီချက်ချင်းသင့်အကူအညီပေးရေးငှါကြွလာနှင့်သင်၏အချိန်နှင့်အရှုံးကိုဖုံးလွှမ်းလျော်ကြေးဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်သင်အာမခံမရှိဘဲဤအောင်မြင်ပါပြီပါဘူးအထူးသဖြင့်ဆိုရင်အာမခံ၏တန်ဖိုးနှင့်အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့. လူ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးနီးပါးရှုထောင့်ဖုံးအုပ်အများအပြားအမျိုးအစားနဲ့အာမခံမူဝါဒများ Sub-အမျိုးအစားခွဲရှိပါတယ်, သို့ရာတွင်ထိုသူတို့အပေါင်းတို့၏ထွက်, အောက်ပါအချက်များကိုသင်ရှိရမည်5အာမခံအဖုံးကယ့်ကိုလုံခြုံစေခြင်းငှါ.
i. ကျန်းမာရေးအာမခံ: သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအရာအားလုံးသည်, သင်သည်တစုံတခုကိုအသက်တာ၌ပြုရရှိပါကနှင့်သင်အာမခံအစီအစဉ်တွေနဲ့လုံခြုံရန်လိုအပ်ပါတယ်. အများစုမှာအာမခံကု​​မ္ပဏီတွေကတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံ packages များ ပူဇော်., ဆုံးနဲ့အလုပ်ရှင်သူတို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်အုပ်စုကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်တွေကိုရှိသည်. ကျန်းမာရေးအာမခံသင့်သာယာဝပြောရေးနှင့်သင်ရှိသည်သူတို့အားထားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်, နှင့်သင်သောသူတို့သည်ကျန်းမာရေးကို Maintenance အဖွဲ့အစည်းများမဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ် (HMO) သင်ကတိုက်ရိုက်ကျန်းမာရေးမူဝါဒအထဲက ယူ. မသွားနိုင်လျှင်.
ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုသင်မဆိုရုတ်တရက်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုသို့မဟုတ်အကျပ်အတည်းများမှကိုဖုံးအုပ်တတ်၏, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆေးရုံဥပဒေကြမ်းများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြာ. သင်ကခွဲစိတ်တူဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကပါဝင်ပတ်သက်လာသောအခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းဆပ်ဖို့ရှိသည်ပေမဲ့, သင်ဆဲချည်းထက်ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်အတူပယ် သာ. ကောင်း၏.
ii. အသက်အာမခံ: အသက်အာမခံမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏အသေခံပြီးနောက်သင်၏မိသားစုနှင့်မှီခိုသူဤမျှလောက်ဂရုစိုက်သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အများဆုံးအထူးသဖြင့်ဆိုရင်. မည်သူမျှမိမိမိသားစုမိမိသေဆုံးပြီးနောက်ခံဖို့လိုလား, သင်သည်အရပ်ဌာန၌တစ်ဦးအသက်အာမခံကြေးရှိသည့်အခါနှင့်ဤသည်အဓိကအားဖြင့်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့မိသားစုပေးသည်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အချင်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပညာရေးနှင့်အရည်အသွေးအမျိုးအစားတွေကိုသင်ရုတ်တရက်ရက်၌သငျ့ dependents. လည်း, တစ်ဖွဲ့လုံးအခေါ်အဝေါ်အသက်အာမခံအစီအစဉ်, သင်တစ်ဦးအငြိမ်းစားယူ scheme ကိုအဖြစ်စုဆောင်းရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်တောင်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့သွားနိုင်ပါတယ်, သင်သည်နောက်တဖန်တပြင်လုံးကိုရန်ပုံငွေများကိုပြန်သုံးလို့ရပါတယ်နေစဉ်; ဒါပေမယ့်အခေါ်အဝေါ်အသက်အာမခံနှင့်အတူသင်တို့၏အသေခံပြီးနောက်လွှမ်းခြုံဘို့ကိုသာအရည်အချင်းပြည့်မီနေကြတယ်.
iii. အိမ်ခြံမြေအာမခံ: သင်သည်အစဉ်အဆက်အနိုင်အထက်စဉ်းစားဖူး, နှင့်မီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်? သင်သည်လည်းသင်၏အိမ်သူအိမ်မထိခိုက်စေရေကြီးမှုနှင့်မုန်တိုင်းများတူသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၏ထင်ရှိသည်? သင်သည်ဤအဖြစ်အပျက်များမည်သည့်ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်မိသားစုဆုံးရှုံးခဲ့ရတိုင်းတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူပွင့်လင်းလမ်းများသို့ထွက်လှည့်စေလိုပါနဲ့? သင်သည်မီးဘေးအန္တရာယ်ဆန့်ကျင်သင့်အိမ်အာမခံရပါမည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်, ရေကြီးမှုနှင့်မုန်တိုင်းများ, အနိုင်အထက်နှင့်အခိုးခံရခြင်း, နှင့်အခြားအလားတူဖြစ်ရပ်.
iv. auto မော်တော်ကားအာမခံ: သင်သည်ကားတစ်စီးကိုပိုင်ဆိုင်နှင့်မောင်းနှင်မယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်အော်တိုကားအာမခံတော်တော်လေးမဖြစ်မနေကြောင်းလူသိများနှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေများကိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိရပါမည်. သင်လမ်းများပေါ်တွင်မော်တော်ယာဉ်များကိုမောင်းနှင်လျှင်သင်အရပ်ဌာန၌အနည်းဆုံးလူနဲ့ third-party အာမခံရှိရမည်, ပြီးပြည့်စုံသောမူဝါဒအဖုံးတာကပိုကောင်းပါတယ်တောင်မှ. auto အာမခံကာကွယ်နှင့်လမ်းကားမတော်တဆမှုဖြစ်သွားသည့်အခါအချို့အဖုံးဖြင့်သင့်ကားကိုခရီးသည်များနှင့်အခြားလမ်းအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေး - ဤမကြာခဏအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်.
v. မသန်စွမ်းမှုအာမခံ: သင်သည်သင်၏မိသားစုတစ်စု၏ breadwinner မှန်လျှင်မသန်မစွမ်းအာမခံလည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်. မသန်မစွမ်းအာမခံအစီအစဉ်, သင်စက်ရုံကိုမတော်တဆမှုနှင့်သင်၏ခြေလက်အင်္ဂါများဆုံးရှုံးမှုကိုဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါအခြားအလုပ်ခွင်ဒဏ်ရာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိ, ပင်မျက်စိကိုသို့မဟုတ်သင်မမှန်ကန်တဲ့သို့မဟုတ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်မှကျူးလွန် render. သင်ဒုက္ခိတပြီးမှနောက်တဖန်သင်၏မိသားစုများအတွက်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ် fend မနိုင်တဲ့အခါ, မသန်မစွမ်းအာမခံအစီအစဉ်ကိုရမှလျော်ကြေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးထောက်ခံသူအချို့ပုံစံအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး.
Tags:5 Major Insurance Covers,5ဗိုလ်မှူးအာမခံသင်လုံခြုံမှုရှိရန်အတွက်ရှိရမည်များအားလုံး
ကိုယ်တော်၏ကော်ပိုရိတ်အရောင်း Target ကကျော်လွန်